ZỌ 3 IJI WEGHACHITE FOTO GỊ EHICHAPỤ NA GAM AKPORO - ADỤ
Zọ 3 iji weghachite foto gị ehichapụ na gam akporo
Foto nke aka anyị na-echetara anyị ọmarịcha ụbọchị ndị gara aga. Ha bụ ihe ncheta weghaara na etiti. Anyị achọghị ịhapụ ha. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ anyị na-akwụsị ihichapụ ha na mberede. Ma ọ bụ n'ihi akpachapụghị anya nke anyị ma ọ bụ ekwentị anyị na-efu, ma ọ bụ mebie, anyị ga-efu foto anyị dị oke ọnụ. Ọfọn, ebidola ịtụ ụjọ naanị, a ka nwere olileanya. Ọ bụ ezie na enweghị usoro ihe ọ bụla etinyere iji weghachite foto ehichapụ, enwere ọrụ ndị ọzọ. Ọrụ igwe ojii dị ka Foto Google nwere nkwado ndabere nke foto gị. E wezụga nke ahụ, enwere ngwa ole na ole nwere ike inyere gị aka weghachite foto gị. See hụrụ, ọ nweghị ihe ihichapụ na-ehichapụ kpamkpam. Ebe nchekwa e kenyere na foto ahụ na-ejide faịlụ ahụ ma ọ bụrụhaala na edeghị ụfọdụ data ọhụrụ na ya. Ya mere ọ bụrụhaala na ị gaghị akaha, ị ka nwere ike ịghachite foto gị ehichapụ.
N'ozuzu na-ekwu okwu, e nwere ụzọ atọ dị iche iche ị ga - esi nwetaghachi foto gị ehichapụ na ngwaọrụ gam akporo gị. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ha n'ụzọ zuru ezu ma nyekwa gị ntuziaka maara ihe maka usoro ọ bụla ma ọ bụ ngwanrọ ọ bụla ga-adị mkpa.
1. Etu aga-esi nweta foto ehichapụ sitere na igwe ojii
Etu aga-esi nweta foto ehichapụ site na foto Google
Etu aga-esi nweta foto ehichapụ na Microsoft OneDrive
Etu aga-esi nweta foto ehichapụ site na Dropbox
2. Naghachi ehichapụ Photos na gam akporo Iji a-atọ ndị ọzọ App
3. Naghachi ehichapụ gam akporo Foto Site na SD Kaadị gị
1. 1. Etu aga-esi nweta foto ehichapụ sitere na igwe ojii
Ọtụtụ ọrụ nchekwa igwe ojii na-enye gị ohere ịkwado data, foto, na vidiyo gị na igwe ojii. Ọrụ ndị dị ka Google Photos, One Drive, na Dropbox bụ ụfọdụ n'ime ọrụ nchekwa igwe ojii kachasị ewu ewu. Ngwaọrụ gam akporo niile nwere arụnyere foto Google na ngwaọrụ ha yana site na ndabara foto gị na igwe ojii. Ruo mgbe ọ gwụla ma ị gbanyụrụ nkwado ndabere na akpaka, enwere ike iweghachite foto gị na igwe ojii. Ọbụna ma ọ bụrụ na ihichapụ foto site na ígwé ojii ( Google foto gallery ), ị ka nwere ike weghachite ha site na ahịhịa nwere ike ịpị foto ahụ ga-anọgide na-emebibeghị maka ụbọchị 60.
Ọ bụrụ na agbanyere nkwado ndabere na akpaka, mgbe ahụ ị ga-ahụ otu oyuyo nke ihe oyiyi ehichapụ na foto Google. Enwere ike wepu onyonyo a na gallery nke ngwaọrụ ma o ka di n'igwe ojii. Ihe ị ga - eme bụ ibudata onyonyo ahụ na ngwaọrụ gị. Soro usoro enyere n'okpuru iji hụ otu:
1. Mbụ, emeghe Foto Google na ngwaọrụ gị.
2. Ugbu a, a na-ahazi faịlụ ndị dị na foto Google dịka ụbọchị. N'ihi ya, ị ga-enwe ike mfe chọta ebe ehichapụ foto. Yabụ, pịgharịa gaa na gallery ahụ wee chọta foto ahụ .
3. Ugbu a enweta na ya.
4. Mgbe nke ahụ mechara, pịa na ntụpọ atọ kwụ ọtọ n’elu aka nri nke ihuenyo ahụ .
5. Ugbu a pịa na Budata bọtịnụ na foto a ga-echekwa na ngwaọrụ gị .
windo 10 enweghị ike ịchọta chromecast
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihichapụ foto ndị ahụ na foto Google yana, ịkwesịrị ịgbaso ụzọ dị iche. Ikwesiri iji weghachite onyonyo ndị a site na ahịhịa ahịhịa ebe foto ehichapụ bi na ụbọchị 60.
1. Mepee Foto Google na ngwaọrụ gị.
2. Ugbu a enweta na Hamburger na akara ngosi na n'elu aka ekpe n'akụkụ ihuenyo.
3. Site na menu, họrọ Abụ m nhọrọ .
4. Ugbu a pịa ma jide onyonyo a ga-ahọpụtakwa ya. I nwekwara ike pịa ọtụtụ ihe oyiyi mgbe nke ahụ gasịrị ma ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu onyonyo ịchọrọ iweghachi.
5. Ozugbo nhọrọ mere, enweta na Weghachi bọtịnụ.
6. Ihe oyiyi ahụ ga-alaghachi na gallery Google Photos ma ị nwere ike ibudata ha n'ọbá akwụkwọ nke ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji usoro a kọwara n'elu.
Microsoft OneDrive bụ ihe ọzọ na-ewu ewu ojii nchekwa nhọrọ na ọtụtụ-eji. Yiri Google Photos, ọ na-enye gị ohere iji weghachite foto azụ na ahịhịa. Agbanyeghị, foto ehichapụrụ na-adị na ahịhịa naanị ụbọchị 30 na OneDrive ma yabụ ị nweghị ike iweghachite foto ndị ehichapụrụ kemgbe ihe karịrị otu ọnwa gara aga.
1. Naanị mepee OneDrive na ngwaọrụ gị.
2. Ugbu a enweta na M na akara ngosi na ala nke ihuenyo gị .
3. Na ebe a, pịa na Egweri Bin nhọrọ.
4. You nwere ike ịchọta ehichapụ foto Ebe a. Kpatụ na menu nhọrọ (ntụpọ atọ) n'akụkụ ya.
5. Ugbu a pịa na Weghachi nhọrọ na foto ahụ ga-alaghachi na Otu Drive gị.
Excel enweghị ịzaghachi otu esi echekwa ọrụ
Dropbox na-arụ ọrụ n'ụzọ dịtụ ntakịrị ma e jiri ya tụnyere Google Photos na One Drive. Ọ bụ ezie na ịnwere ike bulite ma budata foto na igwe ojii site na iji ngwa mkpanaka gị, ịnwere ike weghachite foto site na ahịhịa. Maka nke ahụ, ịkwesịrị iji kọmputa.
1. Banye na gị Akaụntụ Dropbox na PC ma ọ bụ laptọọpụ.
2. Ugbu a pịa na Nhọrọ faịlụ .
3. Na ebe a, họrọ Nhọrọ faịlụ ehichapụ .
4. Faịlụ na-ehichapụ ihe karịrị ikpeazụ 30 ụbọchị nwere ike ịchọta ebe a. Họrọ ndị ị chọrọ iji naghachi na pịa bọtịnụ Weghachi .
Rịba ama na ọ bụrụ na ị na-eji ọrụ igwe ojii ọ bụla ọzọ na-abụghị ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, usoro izugbe ka bụ otu. Ọ bụla ígwé ojii nchekwa nwere a egweri biini si ebe ị nwere ike iweghachi foto ndị na-na mberede ehichapụ gị.
Ọzọkwa Gụọ: Weghachi Ihe Omume Kalịnda Google na Android
Morezọ dị irè iji weghachite foto ehichapụ bụ site na iji ngwa ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụghị foto niile na-echekwa na igwe ojii na akpaghị aka ma ọ bụrụ na ịgbanyela atụmatụ ahụ ma nke a bụ naanị nhọrọ ọzọ ị nwere. Ngwa kachasị mma iji rụọ ọrụ a mara dị ka DiskDigger . Ngwa a kachasị nwee ike ịrụ ọrụ abụọ, otu bụ Basic scan na nke ọzọ bụ Complete scan.
Ugbu a, Basic Doppler na-arụ ọrụ na-abụghị gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ na o nwere mmachi arụmọrụ. Ọ nwere ike na weghachite obere-àgwà thumbnail-sized mbipụta nke ehichapụ oyiyi si dị n'ime oghere faịlụ. Nyocha zuru ezu na aka nke ọzọ ga - enyere gị aka weghachite foto mbụ. Agbanyeghị, iji jiri nyocha zuru ezu, ịkwesịrị inwe gbanye mgbọrọgwụ ngwaọrụ . Iji DiskDigger ị nwere ike weghachite foto ndị ehichapụ n'oge na-adịbeghị anya wee weghachite ha na ngwaọrụ gị ma ọ bụ bugoo ha na nchekwa igwe ojii.
Dị ka e kwuru n'elu, ihe oyiyi ndị ehichapụ na-anọgide na ebe nchekwa ha ekenyela ma ọ bụrụhaala na edegharịrị ihe ọzọ na ha. Yabụ, ngwa ngwa iji ngwa ahụ, ohere ka ị nwere ịchekwaa onyonyo a. Ọzọkwa, ịkwesịrị kpochapụ ngwa ngwa Cleaner niile ozugbo n'ihi na ha nwere ike ihichapụ ihe oyiyi ndị a kpamkpam. Ozugbo ibudatara ngwa ahụ, ị ​​kwesịrị ịgbanyụ Wi-Fi ma ọ bụ data mkpanaka gị iji jide n'aka na enweghị nbudata data ọ bụla na ekwentị gị. Soro usoro enyere n'okpuru iji mụta otu esi eji ngwa ahụ:
1. Mgbe ị meghere ngwa maka oge mbụ, ọ ga-ajụ gị ikikere iji nweta foto, vidiyo, mgbasa ozi na faịlụ ndị ọzọ. Nye ikikere ikike maka ngwa ahụ site na ịpị kwe ka bọtịnụ.
2. Dị ka e kwuru na mbụ, e nwere abụọ bụ isi arụmọrụ isi i scanomi zuru ezu Doppler. Pịa na Nyocha zuru ezu nhọrọ.
3. Ugbu a foto gị niile na mgbasa ozi faịlụ na-echekwara n'okpuru / data nkebi otú enweta na ya.
4. Mgbe nke ahụ mechara, họrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ ịchọ. Họrọ JPEG site na ndepụta nke ụdị faịlụ dị iche iche wee pịa bọtịnụ Ok.
5. Otu ihe ị kwesịrị iburu n’uche bụ na DiskDigger na-enyocha ihe niile maka faịlụ mgbasa ozi dị na ngwaọrụ ahụ na ọ bụghị naanị ndị na-ehichapụ. N'ihi nke a, ịtọlite ​​ụfọdụ nzacha ga-eme ka usoro ahụ dị ngwa ma chekwaa oge. Iji tinye nzacha, kpatụ Ntọala nhọrọ.
6. N’ebe a, tọọ nha oyuyo ahụ ma ọ dịkarịa ala bytes 10,00,000 ka chọọ oyiyi ndị dịkarịa ala nha 1MB.
7. I nwekwara ike ịtọ ụbọchị dị ka oke ọchụchọ nke ga - enyere gị aka imechi nchọcha na foto eserese tupu ma ọ bụ mgbe ụbọchị gachara.
8. The scanning usoro ga-ewe oge na mgbe ọ na-eme, niile foto na-chọpụtara na ngwaọrụ gị ga-edepụtara. Ikwesiri ịchọ ndi nke ehichapụrụ na mberede wee pịa igbe nlele na onyonyo ndị a iji họrọ ha.
9. Ozugbo nhọrọ zuru ezu, enweta na Naghachi bọtịnụ.
10. can nwere ike ịhọrọ ịchekwa weghachi foto na a ígwé ojii na ihe nkesa ma ọ bụ na ụfọdụ ndị ọzọ na nchekwa na ngwaọrụ onwe ya. Họrọ nhọrọ DCIM nke nwere foto niile nke igwefoto ngwaọrụ gị sere.
11. Ugbu a pịa na OK nhọrọ na foto gị ga-eweghachi azụ na ngwaọrụ gị.
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ n'ime gam akporo smartphones ọhụrụ nwere ezigbo oke nchekwa dị n'ime yana iji kaadị SD bụ ihe na-abaghị uru. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime mmadụ ole na ole ahụ ka na-ahọrọ ichekwa ha data na kaadị SD mgbe ahụ ozi ọma dịịrị gị. Ọ bụrụ na foto gị echekwara na mpụga SD kaadị, mgbe ahụ, ha nwere ike enwetaghachi ọbụna mgbe nhichapụ. Nke a bụ n'ihi na data ahụ ka dị na kaadị ebe nchekwa ahụ ma ọ ga-adịgide ebe ahụ ma ọ bụrụhaala na edegharịrị ihe ọzọ na oghere ahụ. Iji weghachite foto ndị a, ịkwesịrị ijikọ ya na kọmputa gị. E nwere di na nwunye nke software na-enye gị ohere iji naghachi ehichapụ data na SD kaadị. Anyị ga-atụle otu ụdị sọftụwia ahụ na ngalaba na-esote. Agbanyeghị, otu ihe ịchọrọ ilebara anya bụ iwepu kaadị SD na ekwentị ozugbo enwere ike igbochi ihe ọ bụla ịdegharị karịa n'ọnọdụ foto.
Nwere ike ibudata Recuva maka Windows na PhotoRec maka Mac . Ozugbo ebudatara ngwanrọ ma wụnye ya, soro usoro ndị enyere n'okpuru iji weghachite foto gị na kaadị ebe nchekwa:
Firstly, jikọọ gị SD kaadị na kọmputa gị site na iji a na-agụ kaadị ma ọ bụ bụrụ na nke a na laptọọpụ, na SD kaadị agụ oghere.
Next elu, na-amalite software. Ozugbo ngwanrọ ahụ malitere, ọ ga-achọpụta ma gosipụta draịva niile dịnụ, gụnyere nke kọmputa.
Ugbu a enweta na kaadị ebe nchekwa ma pịa na Ianomi bọtịnụ .
Akụrụngwa a ga - amalite nyocha kaadi nchekwa kaadị niile ma nke a nwere ike iwe obere oge.
Nwere ike itinye ụfọdụ nzacha ka ibelata ọchụchọ. Pịa na nke e optiondị nhọrọ ma họrọ Eserese.
Na ebe a, họrọ JPEG nhọrọ.
A ga-egosipụta ihe oyiyi niile enyocha na ihuenyo ahụ. Nanị pịa ihe oyiyi ndị a iji họrọ ndị ịchọrọ ị gbakee.
Ozugbo ahọpụtara nhọrọ ahụ, pịa na Naghachi Ugbu a bọtịnụ.
Ihe oyiyi a ga-echekwa na Nchekwa akọwapụtara gị na kọmputa gị. Will ga-ahụ nwee idetuo ha azụ na ngwaọrụ gị.
Na-atụ aro: Idozi Nsogbu Izipu ma ọ bụ Textnweta ederede na gam akporo
Na nke a, anyị na-abịa na njedebe nke ndepụta nke ụzọ dị iche iche ị nwere ike iji weghachite foto gị ehichapụ na gam akporo. Agbanyeghị, ụzọ kachasị mma iji zere nsogbu dị ka nke a n'ọdịnihu bụ ịkwado foto gị na igwe ojii. Can nwere ike iji ihe ọ bụla nke na-ewu ewu ojii nchekwa ọrụ dị ka Google Photos, Dropbox, OneDrive, wdg Ọ bụrụ na ị ịzụlite a àgwà ịnọgide na-enwe a ndabere, mgbe ahụ ị ga-atụfu gị na-echeta. Ọ bụrụgodi na ezuru ekwentị gị ma ọ bụ mebie, data gị dị na igwe ojii.
windo anaghị ebudata mgbe nbanye
proxy server njehie intaneti nyocha
mmalite menu windo 10 oké egwu njehie idozi
ka esi ddos ​​jiri cmd
ngwa nbipute nọ na njehie ala windo 10
microsoft onu anaghị arụ ọrụ nke ọma